Wararkii ugu dambeeyey ee afgembiga Guinea & Madaxwaynihii oo la qabsaday | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Wararkii ugu dambeeyey ee afgembiga Guinea & Madaxwaynihii oo la qabsaday
Wararkii ugu dambeeyey ee afgembiga Guinea & Madaxwaynihii oo la qabsaday
(Conakry) 05 Sebt 2021 – Inqilaabka millatari ee Guinea
Madaxweyne Conde ayaa la xiray kadib laba saacadood oo rasaas culus ka socotay guud ahaan caasimadda Conakry. Askarta Guinea ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta dowladda isla markaana ay ilaalinayaan Dastuurka.
Korneyl Mamady Doumbouya, oo ka tirsan milatariga Guinea ayaa sheegay in Xukuumaddii la kala diray.
Waxaa sidoo kale baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya madaxweyne Alpha Conde oo ay askartu hayaan. Markii dambe waxaa lagu dhex tuuray gaari kadibna Ciidanka ayaa kaxeeyay.
Mr Doumbouya wuxuu sheegay in dhammaan isu socodka gaadiidka hawada iyo dhulka la xiray si ku meel gaar ah, isagoo ka codsaday Shacabka inay guryahooda joogaan oo ay iyaga ( Militariga) war ka sugaan.Mr Doumbouya ayaa sidoo kale wax laga xumaado ku tilmaamay musuqmaasuqa baahsan iyo Saboolnimada Dalka ka jirta oo sida uu sheegay ah, sababaha ugu muhiimsan ee ay ula wareegeen Talada, isagoo sheegay in Mr Conde uu ku guuldareystay inuu fuliyo ballanqaadyadii uu u sameeyay dadka Guinea.
Mr Conde oo 83 jir ah, ayaa mar saddexaad ku guuleystay xilka xafiiska bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, doorasho xoog ah oo uu dad badan ku laayey.
11 sanadood oo uu Maamulayey Dalkaas dhaca Galbeedka Africa, 2010-2021, ayaa maanta la soo afjaray.
Sawirka: Madaxwayne Conde oo Ciidanku gacanta ku dhigeen.
Previous article“Xabado culus ayaa ka dhacaya Madaxtooyada!” – Shaqaaqo siyaasadeed oo ka taagan dal xiriir la lahaa Somaliland
Next articleDAAWO: Xul Afrikaan ah oo ku go’doonsan caasimadda Guinea Conakry